पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 13/07/2020)
मिलान गर्न रोम द्वारा रेल वा रोम मिलान सजिलो र कुशल अनुभव. छैन उल्लेख गर्न, सुन्दर! तपाईं एक लाग्न सक्छ सस्ता रेल जुन भन्दा बढी लिन सक्दछ3घण्टा तर त्यो मिलान बाट रोम को ट्रेनहरूले तपाईंलाई मा उफ्रि गर्न अनुमति दिन्छ अन्वेषण गर्न आवश्यक स्टपहरू. वा तपाईं नन स्टप ट्रेनिटालिया उच्च गति फ्रेसीया ट्रेनमा हाम फाल्न सक्नुहुन्छ, जो लिन्छ बस3घन्टा र3मिनेट, हवाइजहाजबाट पूर्ण यात्राको तुलनामा धेरै कम! जुनसुकै निर्णय गरे पनि यस द्रुत मार्गनिर्देशनले तपाईंलाई आफु र तपाईंको यात्राको लागि उत्तम निर्णय लिन मद्दत गर्दछ!
सर्वश्रेष्ठ ट्रेन टिकट प्रदायक: Save A Train of course
मिलान संग रूपमा यसको राजधानी, यो पर्यटकहरूलाई आफ्नो लाखौं मा बगालको कुनै आश्चर्य छ लोम्बार्डी प्रत्येक वर्ष. तर फेसन मनपर्ने परे, प्रशस्त थप इटाली को लोम्बार्डी क्षेत्रमा ठाउँहरू भ्रमण पर्छ भ्रमण गर्न बाहिर रो छन्.
असंख्य छन् कुराहरू के गर्न यस क्षेत्रमा; प्रशंसा जलमग्न महल मा सुरम्य पोखरी, भेट्न वायलिन कार्यशाला मा ऐतिहासिक शहर, being amazed at the art and architecture of Mantua – Lombardy really packsapunch for visitors.
हामी विश्वास Emilia Romagna सजिलै बाहिर खाने लागि थप मनाइन्छ टस्क्यानी र लोम्बार्डी र प्रस्ताव temptingly किफायती विकल्प को आकर्षण मेल खाने र आवास. यो छ को रोम रेल यात्रा गर्न मिलान सर्वश्रेष्ठ हाम्रो विचारमा राखिएको गोप्य तर पनि रेल द्वारा मिलान गर्न रोम! बन्द हाम फाल्न यो स्टेशन र जाने अन्वेषण!
एक भन्दा कम 30 अन मिनेट सवारी उच्च गतिको रेल भेनिस बाट, Padua पनि अक्सर बेवास्ता देखि आगंतुकों को बहुमत. अझै, यो बनाउँछ लागि एक ठूलो दिन भेनिस यात्रा, एक झलक को मा भेटी धनी इतिहास शहर को कि एक पटक एक शक्तिशाली Commune थियो.
इटाली दोस्रो पुरानो विश्वविद्यालय घर, मा स्थापित 1222, Padua retained छ vivacious वातावरण को एक विश्वविद्यालय शहर, सक्रिय piazzas संग र arcaded सडकमा, को हर एक ठाँउ Spritz साँझ मा दिन बतास रूपमा डे rigueur छ जहाँ क्याफे र बारहरू प्रशस्त. नछुटाउ!
कसैले यात्रा को लागि मिलान रोम गर्न Trenitalia ट्रेनहरु को साथ वा अन्य बाटोको वरिपरि लागि देख गहिरो स्तरित, अक्सर unvarnished र निडर भई प्रामाणिक यात्रा अनुभव.
हामी तपाईंलाई जेनोवामा जाने सल्लाह दिन्छौं (जो भेनिस जस्तै एक पटक थियो एक शक्तिशाली समुद्री गणतन्त्र) fronting the Sea Ligurian. थप कच्चा र वास्तविक अनुभव भेटी, प्राप्त एक undiluted इतिहास को अर्थमा, र नगर को धनी कला दृश्य अनुभव र उल्लेखनीय वास्तुकला. One of the top reasons we enjoy it so much is that त्यहाँ ठूलो कला हो र संग्रहालयहरु uncrowded छन्! You can find काम गरेर Caravaggio, भ्यान Dyck. Rubens, Durer र Veronese मा Palazzo Bianco र Palazzo Rosso र अग्ले genericname अन्य पुरानो विश्व masterpieces मा धेरै स्थलहरु, जस्तै Palazzo Reale र गैलरी Nazionale di Palazzo Spinola. त्यहाँ पनि असल उदाहरण को Genoese स्कूल को कला, को 17 औं सताब्दी मा प्रमुख, मा Palazzo Blanco.
Trenitalia उच्च गति उच्च गति (वी) रेल प्रति घण्टा एक पटक वा दुई पटक छोड्न मिलान सेन्ट्रल स्टेशन रोम Termini स्टेशन लागि - averaging 90 रेलका प्रति दिन. को पुराना Trenitalia रेल पात मिलान सेन्ट्रल स्टेशन मा 5:00 a.m. अन्तिम रेल रोम पात मिलान मा 11:18 p.m.
इटाली उच्च गति ट्रेन टिकटको ठूलो अतिरिक्त छ. तपाईंको सिटमा इलेक्ट्रिकल आउटलेटहरू यन्त्रहरू चार्ज गर्नका साथसाथै वाइफाइमा फ्रेस्क्रियास्टा फ्रेक्रिया र फ्रेन्सीआर्गन्टो ट्रेनहरूमा. तथापि, तपाईं भित्र हुँदा यो संकेत ड्रप हुनेछ सुरुङको र स्टेशन मा. तपाईं प्रत्येक ट्रेन मा खाना कार मा एक महान इटालियन क्याफे हुन सक्छ. ल्याउँछ कि एक खाना गाडी साथै नाश्ता, स्यान्डविच, र आफ्नो सीट गर्न पेय पदार्थ. प्रत्येक कार को अन्त मा, तपाईं पसलमा रैक को एक ट्वाइलेट र प्रशस्त पाउनुहुनेछ ठूलो सामान.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “मिलान रोम गर्न Trenitalia ट्रेनहरूको साथ” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/milan-rome-train/ – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel Italybytrain मिलान milano रोम trainjourney travelrome